Snn Nepal देउवालाई बहुमत जुटाउन दिनभरि दौडधूप , के–के भयो ? – Snn Nepal
देउवालाई बहुमत जुटाउन दिनभरि दौडधूप , के–के भयो ?
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएकै दिन सोमबार राति ९ बजेदेखि राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी छिन् । विपक्षी गठबन्धनबाट काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका एकमात्र दाबेदार हुन् । तर, उनले बैशाख ३० गते राति ९ बजेभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाउनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीका बन्नका लागि बहुमत जुटाउन मंगलबार दिनभरि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले के–के गरे त रु अनि उनका सहयोगी दलका नेताहरु प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवले के गरे रु जसपामा तटस्थ बसेर ओलीलाई फाइदा पुर्याइरहेका महन्थ ठाकुरको दिनचर्या कसरी बित्यो रु अनि एमालेको माधव नेपाल पक्षको रणनीति कस्तो बन्यो ?
यिनै विषयहरुमा काँग्रेस, माओवादी, माधव नेपाल समूह र जसपाका दुबै समूहका दिनभरिका गतिविधिलाई नियाल्ने प्रयत्न गरेको छ ।
शीतलनिवास स्रोतले भन्यो, ‘देउवाजीले बहुमत जुटाएको भए त आजै शीतलनिवास आइसक्नुपर्ने हो, अब ३० गते राति ९ बजेसम्म पनि बहुमत जुटाउनुभएन भने त धारा ७६९३० अनुसार केपी ओलीले राति नै सपथ ग्रहण गर्ने सम्भावना रहन्छ ।’
काँग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार सरकार निर्माणका सन्दर्भमा देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा मंगलबार बिहान देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवबीच छलफल भएको थियो ।
उनीहरुबीचको छलफलपछि दिउँसो ३ बजे बसेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले ७६९२० बमोजिम सरकारको दाबी गर्ने निर्णय गरेको थियो । लेखकका अनुसार त्यसको नेतृत्व काँग्रेसले गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष तटस्थ बसिदिएपछि काँग्रेस, माओवादी र जसपा ९उपेन्द्र यादव पक्ष०को गठबन्धनलाई सरकार बनाउन गाह्रो भएको छ । तीन दलीय गठबन्धनलाई सरकार बनाउन १२ मत कम भइरहेको छ । त्यो १२ मत तान्नका लागि उपेन्द्र यादव पक्ष दिनभर गृहकार्य गरेका छन् । उनीहरुको प्रयास अझै जारी छ ।